David Blatt, isithombe okuyinto uvezwa impahla, kuyinto wangaphambili American basketball. Uma umdlali yimpumelelo has imvelaphi Israeli. Ngakho-ke, ekupheleni amathuba okuba umculi okhokhelwayo ngokuphindaphindiwe ukuthi aqeqeshe basketball amakilabhu ezweni lazo. Okwamanje, uDavide Blatt usekhonze njengephayona Umqeqeshi leqembu Turkish "Darushshafaka".
David Blatt umculi okhokhelwayo waqala ngo-1976. zonyaka Over 5 umdlali abasha bavikela imibala leqembu umfundi kusuka Princeton University. Ngo-1981, onekhono basketball lithole umnikelo ovela club Israeli "iMaccabi" (Haifa). kamuva Blatt owadlalela "Hapoel" (Nahari) kanye "Elitzur" (Galil-oPhezukonke).
Isinqumo zomhlalaphansi womdlali, uDavide wathatha ngo-1992. Ukuthatha lesi sinyathelo basketball wenza ukulimala unomphela. Ngesikhathi esifanayo, Blatt esesekhaya, ukuthatha indawo izisebenzi coaching, "Hapoel" kusukela Galil oPhezukonke. Kakade isizini 1993/1994, umqeqeshi we-basketball owayengumshushisi waba iqembu egcwele. Ngo-1999, uDavid Blatt waqokwa umqeqeshi the best ngesikhathi club Israeli "iMaccabi" (Tel Aviv).
Ekuqaleni, ngo-2004 waphathiswa kuchwepheshe njengoba umqeqeshi we Petersburg "Dynamo". Kakade ngonyaka wokuqala wokusebenza eqenjini elisha, uDavide wakwazi ukuletha amashaji ngokuwina Cup FIBA Euroleague.
Ngenkathi 2005/2006 umqeqeshi wahola club "Benetton" Treviso. Ngokusho imiphumela ithimba yonyaka ukusebenza ukuze unikezwe isikhundla in the ANCYL eliphakeme Italy.
Umsebenzi weqembu lesizwe Russian
Ekupheleni kuka-2006, uDavide Blatt umsebenzi kwakumenza akwazi ukuthutha amatomu we-basketball ithimba Russian. Kakade ngo-2007, izigceme bakhe babesenkonzweni yokugcina European Cup, okuyinto wahlasela iqembu Spanish ukuthi iwine ukuthi uzothatha indondo yegolide ka ubuqhawe. Ngenxa yalokho - David Blatt kwaba uchwepheshe lokuqala angaphandle othole indondo "Umqeqeshi ahlonishwe of Russia." Mentor usesulile ekubeni umqeqeshi weqembu lesizwe ngo-2012, benqaba ukuvuselela inkontileka ne basketball wezwe mfelandawonye.
Ngenkathi 2014/2015 uDavide Blatt emva sekhefu elifushane emkhakheni coaching isisayine isivumelwano club National Basketball Association, "Cleveland Cavaliers". Kakade isizini umeluleki lokuqala amacala amasha ochungechungeni yokugcina US ubuqhawe game. Naphezu imiphumela emihle yomsebenzi iqembu, Blatt uthole i layoff ezingalindelekile ekuseni 2016. Kucatshangwa ukuthi isizathu ngokwephula isivumelwano kwaba Ukunganeliseki ka omunye wabaholi leqembu Lebron James wokwakha kabusha amageyimu Ukugcizelelwa iqembu, ngokukhethekile, ushintsho amacebo yokuziphatha ku inkantolo, owawuthi "izinkanyezi" baphoqwa ukuba basebenzele kozakwethu futhi afeze yonke omningi anolaka.
David Blatt eyaziwa ngokuthi uchwepheshe owazi indlela ukuhlanganisa sakhe iqembu action game, nobuntu basketball European futhi American. Umqeqeshi uhlelo kudinga ingcindezi engapheli abaphikisi, kutholakala ulwazi olusha ngokushesha phambili okusheshayo kanye front line. Inkathi emqoka ekwakhiweni umdlalo Blatt wathi ukusetshenziswa ku-site amandla phambili ngubani rezultativen ku Ufaka of indawo enamaphuzu amathathu futhi ukwazi ukusebenza kude iringi isitha.
Dmitry Kulagin: Biography nokufeza abasha basketball
Ukugijima ku-basketball, lokho okungokwalo, futhi yiziphi izijeziso ohilelekile
Seamless zangaphansi - Izinzuzo Ububi
Ukushisa namakhaza ipuleti Swedish (UWB)
Izinhlobo eziyinhloko zedatha ye-Mysql
Indlela ukususa flooring ubudala? Indlela ukubuyisela parquet ubudala
Isidleke: indlela yokwenza isithombe ngemuva html